Bixi adeegyo kala duwan oo wax lagu iibiyo oo ah gudbinta adeegga. Propont
Guri > Adeegyo caadi ah
Zhejiang YIPENG MARPRENG MUQDISHO MACLUUMAADKA, LTD.MAS ayaa la aasaasay 2006, oo ku yaal bartamaha magaalada Yangtze River Velta City, halka uu ku dhow yahay Shangzhou, Ningbo, oo ah Suzhou City, iwm, taasi waa mid ku habboon gaadiidka . Shirkadda waa aruurinta mashiinka mashiinka kala duwan, dabaqa 3-da, gogosha sagxada oo ah jub galka jirka oo ah tacliinta gaarka ah ee cilmi-baarista, horumarka, waxsoosaarka iyo iibka.
MAAMULKA APPON-ka waa aruurinta mashiinka mashiinka kala duwan, dabaqa 3t 3t 3t 3t, dabaqa 3-da, gudbinta dabaqa ayaa ah jaakadaha jirka ee cilmi-baarista, horumarka, waxsoosaarka iyo iibka iyo iibka.
1. Waxaan leenahay shahaadooyin: Waxaan leenahay shahaadada aqoonta rasmiga ah
2. Teknolojiyadda wax soo saarka: Daraasad joogto ah iyo hal-abuurnimo
3. Ku qanacsanaanta macaamiisha: Bixi wax soo saar lagu qanco
Shaygaani wuxuu hor istaagay tijaabada kooxdayaga QC ee xirfadda leh iyo dhinac saddexaad oo awood u leh.
ayaa lagu takhasusay wax soo saarka sanado badan.
Alaabta waa hypoalleergic sidaas darteedna jidhka ayuu u jiidaa, oo si weyn u yareynaya halista falcelinta xun.